Miyuu Eden Hazard ka soo muuqan karaa kulanka la wada suagayo ee Madrid Derby? – Gool FM
(Madrid) 26 Jan 2020. Muddo dhan labo bilood ayaa laga joogaa markii uu Eden Hazard dhaawac ka soo gaaray kulan Real Madrid ay wajaheysay PSG, islmarkaana qeyb ka ahaa tartanka xiisaha leh ee UEFA Champions League.
Ciyaaryahanka caalamiga ah qaranka Belgium ee Eden Hazard ayaa shaki laga muujinayaa inuu ka soo muuqanayo kulanka xiisaha badan ee Madrid Derby.
Hadaba, Weeraryahanka Real Madrid Eden Hazard ayaa laga cabsi qabaa in uu seego kulanka ay iska hor iman doonan Los Blancos iyo Atletico Madrid ee loo yaqaano Madrid Derby kaas oo dhici doona 1-da bisha soo aadan ee Feebaraayo.
Thomas Meunier oo qadka dhexe uga ciyaara PSG ayaa dhaawac jillibka ah u geystay Hazard, labo bilood ka hor.
Hazard ayaa dib ugu soo laabtay tababarka kooxda macallin Zinedine Zidane, laakiin 100% diyaar uma ahan in uu ciyaaro, sida lagu sheegay warbixin ka soo baxday gudaha wadanka Belgium gaar ahaan wargeyska “Le Derniere Heure”.
Xidigii hore ee kooxaha Lille iyo Chelsea ayaa ka maqnaa Madrid 12 kulan, 60 maalmood oo uu seegay garoomada.
Zidane ayaa sidoo kale shirkii jaraa’id ee ciyaarta Real Valladolid ka hor ku sheegay in uusan hubin goorta uu garoomada dib ugu soo laabanayo Eden Hazard.
"Ronaldo wuu dhimanayaa ka soo gaara" - Maxaa dhacay habeenkii Dalima Ronaldo oo dhiman gaaray & Qiyaanadii jaceyl ee ka ooysiisay!